Maxkamadda sare Ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku xukuntay Gacan ku dhiigle la sheegay inuu horey u dillay Wariye Xasan Yuusuf Absuge. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Maxkamadda sare Ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku xukuntay Gacan...
Maxkamadda sare Ciidamada qalabka sida oo xukun dil ah ku xukuntay Gacan ku dhiigle la sheegay inuu horey u dillay Wariye Xasan Yuusuf Absuge.
Waxaa maanta maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ay dil toogasho kadib markii la sheegay inuu dillay marxuum Wariye Yuusuf Xasan ABsuge.
Dambiilahaan oo lagu magacaabo Aadan Sheekh Cabdi Xuseen kaas oo 21-kii bisha September 2012 dillay marxuum Yuusuf Xasan Absuge kuna dillay dugsiga sare ee Generaal Daa’uud.
Gaashanle Sare C/laahi Muuse oo katirsan maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ayaa ka hor aqriyay maxkamadda horteeda isagoo sheegay in maxkamadda kadib cadaymo ay heshay ay ogaatay inuu ka tirsan yahay Al Shabab Gacan ku dhiigle Aadan Sheekh Cabdi Sheekh Xuseen oo dillay Wariye Xasan Yuusuf Absuge oo ka howlgali jiray Radio Maanta.
Horey ayuu racfaan ugu qaatay Gacan ku dhiigle Aadan Sheekh Cabdi Sheekh Xuseen laakin ugu dambeyn maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ayaa go’aan ka gaartay dambiilahaas iyadoo la tixraacayo xeerka iqaabta 1-aad iyo 2-aad ee soo baxay sanadkii 1964-tii iyo xeerka iqaabta ciidamada qalabka sida ee 109,102,121,122,123.
Xasan Yuusuf Absuge ayaa kamid ahaa wariyayaasha magaalada Muqdisho ka howlgali jiray oo horeyna ugu tirsanaa xilligii xukumaddii kacaanka wasaaradda warfaafinta.
Previous articleHowlgalo ay ciidamada ka sameeyen Muqdisho oo lagu soo qab qabtay hub iyo dad lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin AL Shabab.
Next articleAgaasimihii hore Nabad Sugidda Somalia oo beeniyay Eedeymo ay u soo jeediyeen kooxda Monitoring Group.